Tsika Dzakasiyana - Trump Eco Technology Co, Ltd.
Isu takaunganidza muindasitiri kwemakore makumi matatu nemasere. Chii chinotsigira kukura kwedu uye kufambira mberi? Ndiro simba rakashinga pakunamata nekutenda uye tsika yekuenderera mberi nekuvandudza. Hazvirambiki kuti isu tine michina yemhando yepamusoro uye nzira dzehutungamiriri, asi simba hombe rekutyaira rakaumbwa neiyi isingaonekwe kunaya kwetsika ndiko kunobva budiriro yedu.
Zvichakadaro, sekambani yakasiyanasiyana uye ine tsika dzakasiyana, tinoona kuti kusimudzira kwakasimba kunoda kuzvipira kwenguva refu uye mutoro weboka kubva kuhupfumi, zvakatipoteredza uye zvemagariro.
Mukutarisana nekuwedzera kusvibiswa kwezvakatipoteredza, isu takazvipira mukusimudzira uye hunyanzvi hwezvinhu zvine hukama nharaunda. Rega mapurojekiti ashandise zvakanakira nharaunda zvinhu kana kuwedzera zviwanikwa zvakare.
Rega mushandi wese ashande zvine shungu, ade maindasitiri edu uye chinzvimbo, uye vagare vachivandudza hunyanzvi hwavo neruzivo. Rega mushandi wese ave nyanzvi pachinzvimbo chavo. Rega vashandi vagoverane zvibereko zvekusimukira kwekambani nemhuri dzavo nevana. Isu tiri mhuri huru.
Rega vatengi vawane zvimwe zvakakosha zvigadzirwa, rega vashandi vawane kuwedzera kuvandudza, ita kuti nzanga ive neushamwari zvakatipoteredza, uye rega vatengesi vavandudze uye vavandudze. Vatengi, vashandi, vanotengesa uye nzanga vanoenda pamwe chete kusimudzira kwakasimba.